» भारतको ओम स्टर्लिङ ग्लोबल विश्वविद्यालयले विशेष छात्रावृत्ति दिने
भारतको ओम स्टर्लिङ ग्लोबल विश्वविद्यालयले विशेष छात्रावृत्ति दिने
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १३:३६
३१ बैशाख, बुटवल । भारतको चन्दीगढ रोड हरियाणामा रहेको ओम स्टर्लिङ ग्लोबल युनिभर्सिटीले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विशेष छात्रावृत्ति दिने घोषणा गरेको छ ।
आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वविद्यालयले यस्तो घोषणा गरेको हो । विश्वविद्यालयमा प्यारामेडिकल, बिएस्सी अप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरापी, अपरेशन थिएटर, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, बि. फार्मेसी, बि. फिजियोथेरापी, ईन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर (बि.टेक र एम.टेक. र व्यवस्थापन, बिबिए र एमबिए) हेल्थ एसिस्टेन्ट, बिएस्सी एग्रिकल्चर लगायतका दर्जनभन्दा बढी कोर्सहरुमा पढाई हुने गर्दछ ।
सो विश्वविद्यालयमा नेपालबाट समेत ५० भन्दा बढि विद्यार्थीहरु हाल अध्ययनरत रहेको विश्वविद्यालयका डिन मार्के्ट्रिङ रमनजित सिंहले जानकारी दिए । स्थापनाको एक वर्षमै विदेशबाट समेत बिद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि बिश्व बिद्यालयमा आउदा आफुहरुको आत्मबिश्वास बढेको उनले बताए ।
विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनेलाई विशेष छात्रावृद्धिपनि दिन सुरु गरेको सिंहले बताए । उनका अनुसार हाल उक्त विश्विद्यालयमा भुटान, नेपाल, श्रीलंका, घाना, नाईजेरिया, मुजाम्बिक, केन्या, यमनलगायतका २० देशका विद्यार्थीहरु अहिले अध्ययनरत रहेका छन ।
विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक विजेन्द्र राजौरालेआफूहरुले विश्वस्तरीय अध्यापन गराउँदै आएको दाबी गरे । उनले भने ‘हाम्रो विश्वविद्यालय व्यवसायिक छ, स्मार्ट छ, अध्याधुनिक प्रविधि छ, नेपाली विद्यार्थीलाई सुहाउँदो कोर्शहरु पनि डिजाईन गरिएको छ । विश्वविद्यालयको अध्ययनपछि विद्यार्थीहरु उद्योग तथा व्यवसायमा जान सजिलो हुन्छ ।’
व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्न समेत विश्वविद्यालयले सहयोग पुर्याउँदै आएको उनले बताए । यो वर्षको शैक्षिक सत्रमा नेपालबाट करिब दुई सय जना विद्यार्थी भर्ना हुने आफूहरुको विश्वास रहेको पनि उहाले बताउनु भयो। उक्त विश्वविद्यालयमा अहिले कुल तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।